Maxaa laga bartay wajiga hore ee horyaalka Somali Premier League oo la soo gabagabeeyey? – Gool FM
Kooxda Barcelona oo hoos u dhigtay fursad ay kula soo wareegi lahayd laacibka Chelsea ee Willian
Sadio Mane oo si layaab leh u soo gaba-gabeeyay wararka la xiriirinaya Real Madrid
Maxaa laga bartay wajiga hore ee horyaalka Somali Premier League oo la soo gabagabeeyey?
(Muqdisho) 27 Feb 2020. Horyaalka Somali Premier League ayaa la soo gabagabeeyay wajigiisa hore ee kal ciyaareedkan 2019-20.
Sanadkan horyaalka waa mid ka duwan sanadihii hore, maadaama ay kooxaha dhibaco ahaan ay isku dhow yihiin, taas oo ku muujinaysa in sanadkan horyaalka uu xiisihiisa wato.
Saddexdii sano ee la soo dhaafay waxaa ku guuleysanaysa kooxda kubadda cagta Dekedda, iyadoo iminka wajiga hore horyaalka ku hoggaamineyso 2-dhibcood waxayna leedahay 20-dhibcood.
Haddaba Wajiga Hore horyaalka Somali Premier League maxaa ka baranay?.
Kaliya Labo kooxood ayaa la kulmay guuldarooyinkii ugu badanaa horyaalka wajigiisa hore waxayna kala yihiin; Rajo Football Club iyo Gaadiidka kuwaas oo la kulmay min lix guuldarro, taas oo ka dhigan in aysan sanadkan ku jirin bandhig cajiib ah.
Kooxda Rajo Football Club ayaa noqotay kooxda kaliya laga dhaliyay goolasha ugu badan wareegga hore ee horyaalka, waxaana laga dhaliyay oo shabaqadooda ku maqan kooxdan 11-gool.
Naadiga Mogadishu City Club ayaa ah kooxda kaliya wajiga hore goolashii ugu badan ka dhalisay, iyaodo ay shabaqa gaartay tiro 14-Goor ah, mana jirto koox dhalisay goolal ka badan MCC.
Kooxaha kala ah Dekedda fc, Elman iyo Horseed ayaa la kulmay min hal guuldarro ah wareegga koowad ee horyaalka, waana kooxaha kaliya hal mar dhulka la dhigay, waxayna sanadkan u tartamayan ku guuleysiga Horyaalka Somali Premier League, tiiyo ay jirto inay ku jiraan kaalimaha kala ah; Dekedda koowad, Elman labaad iyo Horseed oo ku jirta booska saddexaad, dhibco yar ayaa u dhaxeeya kooxahan.
Gaadiidka, Rajo Iyo Jazeera Sports Club ayaa loo calaamadeeyay inay yihiin kooxaha kaliya hal guul gaaray wajiga hore horyaalka iyagoo dheelay 9-kulan, haddii aan kala qaadno, Jazeera Sports Club, hal kulan Guul, saddex kulan bar baro, halka shan kulan kale ay khasaaro la kulantay, Gaadiidka hal kulan guul, labo kulan barbaro, halka lix kulan kale ay guuldarro la kulantay, Rajo FC, hal kulan guul, labo kulan barbaro, halka lix kulan laga adkaaday, kuna darso waa saddexda kooxood ugu hooseeya horyaalka.
Tan iyo sanadkii 2015-kii Ciyaaryahan Feysal Xasan Xaashi ayaa sanadkan hoggaaminaya tartanka gooldhalinta horyaalka Somali Premier League, waxaan xiddigan ugu dambeysay inuu ku guuleysto kabta gooldhalinta horyaalka sanadkii 2015-kii xiligaas uu joogay kooxda Jeenyo.
Kooxda kubadda cagta Elman ayaa noqotay kooxda kaliya hal kulan ka dhalisay horyaalka wajiga hore 6-gool, waxayna ku xasuuqeen naadiga Rajo Ciyaar dhacday 31-01-2020.
Shan sano kadib naadig Mogadishu City CLub ayaa ka adkaatay Kooxda Dekedda, iyadoo ugu awood sheegatay 5-0, kulan ciyaareed dhacay 5-02-20.
FG: Dhacdooyin kale ee laga diiwan galiyay waa ay jiraan horyaalka, balse intaa ayaan ku soo koobnay.
Inter Milan oo doonaysa inay la soo wareegto midkood labo ka mid ah daafacyada Kooxda Chelsea
Macallin Frank Lampard oo doonaya inuu siddeed ciyaaryahan ka diro Kooxda Chelsea